अपी पावरले चैत्र २५ गतेदेखि हकप्रद खुल्ला गर्ने, कहिलेसम्म सेयर किन्दा पाइन्छ हकप्रद ? - Arthasansar
अपी पावरले चैत्र २५ गतेदेखि हकप्रद खुल्ला गर्ने, कहिलेसम्म सेयर किन्दा पाइन्छ हकप्रद ?
बुधबार, ०९ चैत्र २०७८, ०८ : ०१ मा प्रकाशित
अपी पावर कम्पनी लिमिटेडले चैत्र २५ गतेबाट हकप्रद सेयर निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ ।
कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजीको १ः०.३९३६ को अनुपातमा एक सय रूपैयाँ अंकित दरमा एक अर्ब ८ करोड ६० लाख रूपैयाँ बराबरको १ करोड ८ लाख ६० हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो ।
कम्पनीले हकप्रद प्रयोजनका लागि हकप्रद निष्कासन गर्ने प्रयोजनका लागि चैत्र १४ गते, सोमबार एक दिन बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसैले, चैत्र १३ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा कारोबार भई कायम भएका शेयरधनीहरूले मात्र हकप्रद सेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन् ।
कम्पनीको हकप्रदमा चैत्र २५ गतेदेखि २०७९ साल बैशाख १५ गते बैंकिङ समयसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।
कम्पनीले प्रकाशन गरेको सूचना यस्तो छः